खोज - यो केटो हो?
यो केटो हो?
त्यो सबै जानकारी
तपाईंलाई केटो खानाहरू चाहिन्छ
सबै खाद्य पदार्थ
वजन कम गर्नुहोस्
माछा र समुद्री खाना
सूप र स्ट्यूज
© 2022 यो केटो हो?
वा तिनीहरूलाई खोज्नुहोस् हाम्रो कोटिहरु मार्फत.
के तपाईंले भर्खरै केटो आहार सुरु गर्नुभएको छ र कहाँ सुरु गर्ने थाहा छैन?
यी भिडियोहरूसँग सुरु गर्नुहोस्:
केटो आहार वा केटोजेनिक आहार के हो?
केटो आहारमा सुरु गर्न9आधारभूत सुझावहरू।
तपाईं हाम्रा लेखहरूको साथ यी भिडियोहरूको सामग्री विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ:
केटो आहार: कम कार्बोहाइड्रेट केटोजेनिक आहारको लागि अन्तिम गाइड.
शुरुआतीहरूको लागि9आवश्यक केटो सुझावहरू.
पछिल्लो लेख थपियो
केटो फलहरू: अन्तिम गाइड
यदि तपाइँ केहि समयको लागि केटो आहारमा हुनुहुन्छ भने, तपाइँमा फलको कमी हुन सक्छ। धेरैजसो मानिसले मान्छन् कि...
5 एस्ट्रोजेन प्रभुत्व को कारणहरु र यसलाई कसरी उल्टाउने
हार्मोनल उतार-चढ़ाव पत्ता लगाउन गाह्रो छ। लक्षणहरू प्रायः सूक्ष्म हुन्छन्, जस्तै थकान वा मुड स्विङहरू, र सामान्यतया तपाइँको चक्र संग परिवर्तन हुन्छ।
केटोमा कम्बुचा: के यो राम्रो विचार हो वा यसलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ?
मलाई अनुमान गर्न दिनुहोस्। तपाईंले आफ्नो स्थानीय पसलमा कम्बुचा देख्नुभएको छ र तपाईंको साथीले यसको बारेमा कुरा गर्न छोड्ने छैन। सायद तपाईंले पनि प्रयास गर्नुभएको छ। र अब तपाईंसँग…
केटो वाइन: सर्वश्रेष्ठ कम कार्ब वाइनहरूको लागि अन्तिम गाइड
कम कार्बोहाइड्रेट वा केटो आहार सुरु गर्दा अधिकांश मानिसहरूले सोध्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्नहरू मध्ये एक हो: के तपाईं…
केटो र गाउट: केटो डाइटले गाउटका लक्षणहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ?
यदि तपाइँ मासु, माछा, वा अंगको मासु खानुहुन्छ भने, तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ: के यी केटो-अनुकूल खानाहरूले तपाइँको गाउट विकास गर्ने जोखिम बढाउँछ? आखिर बुद्धि...
केटो सक्रिय चारकोल छ? यो पूरकले वास्तवमा कसरी काम गर्छ?
धेरै मानिसहरू सक्रिय कार्बन बारे उत्साहित छन्। यो सप्लिमेन्टले डिटोक्सिफिकेशन, आन्द्राको स्वास्थ्य, दाँत सेतो पार्ने, र थप मद्दत गर्न भनिएको छ। ती…
केटोसिस हुन कति समय लाग्छ?
"के म अझै केटोसिसमा छैन?" केटो डाइटरहरू बीच यो एक सामान्य प्रश्न हो। केटोसिसमा पुग्ने समय तपाईंको तालिकामा निर्भर गर्दछ ...
घिउ बटर (स्पष्ट मक्खन): वास्तविक सुपरफुड वा कुल होक्स?
घिउ, जसलाई स्पष्ट मक्खन पनि भनिन्छ, शताब्दीयौंदेखि भारतीय खाना पकाउने मुख्य पदार्थ हो। यो चिकित्सा को एक प्रमुख भाग हो ...
भर्खरको रेसिपीहरू थपियो
परफेक्ट केटो ग्रीन स्मूदी रेसिपी
धेरै मानिसहरू सोच्छन् कि केटोजेनिक आहार पछ्याउनु भनेको तपाईंको दिन मासु, चीज र मक्खनले भरिएको हो। तर यो थप हुन सकेन ...
4 घटक कम कार्ब क्लाउड रोटी नुस्खा
के तपाई धेरै रोटी खान चाहनुहुन्छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईं एक्लै हुनुहुन्न। किनकी केटोजेनिक आहार भनेको कम कार्बोहाइड्रेट खानु हो, यो ...
20 मिनेट केटो कालो चिकन नुस्खा
कालो कुखुराको रेसिपीहरू सामान्यतया ब्ल्याकन गरिएको सिजनहरूमा बनाइन्छ जसमा चिनी हुन्छ र कसलाई के थाहा छ। यो केटो संस्करण...
केटो र कम कार्ब मखमली कद्दू पाई रेसिपी
बिदाहरू नजिकिंदै जाँदा, तिनीहरूले तपाईंलाई भविष्यका भेलाहरूमा योगदान दिनको लागि केटो मिठाई बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर सोध्न सक्छन्। सौभाग्य देखि, यो ...
भ्यालेन्टाइन डेको लागि रेड भेलभेट लो कार्ब, केटो र ग्लुटेन-मुक्त डोनट्स रेसिपी
के यो तपाइँको माया संग केहि मनाउने समय हो? यदि भ्यालेन्टाइन डे वा वार्षिकोत्सव वा ठूलो उत्सव आउँछ भने, तपाईंले केही तयारी गर्न सक्नुहुन्छ ...
18 केटो एग्लेस ब्रेकफास्ट रेसिपीहरू
के तपाईंलाई अण्डा बिना केटो ब्रेकफास्ट सम्भव छ जस्तो लाग्छ? अण्डा केटोजेनिक आहार मा एक प्रमुख हो। ५ ग्राम बोसो, ६ ग्राम...
क्रिसमस ग्लुटेन-मुक्त केटोजेनिक जिंजरब्रेड कुकी रेसिपी
जब बिदाको मौसम घुम्छ, तपाईंले आफ्नो मनपर्ने क्रिसमस कुकीहरू छुटाउनु पर्दैन किनभने तपाईं कम कार्ब आहारमा हुनुहुन्छ। ...
केटो चिकन टिक्का मसाला रेसिपी ३० मिनेटमा
चिकन टिक्का मसाला पश्चिममा सबैभन्दा लोकप्रिय भारतीय व्यंजनहरू मध्ये एक हो। परम्परागत नुस्खा भात र नान रोटी संग सेवा गरिन्छ ...
पछिल्लो पटक थपिएका खानाहरू
केटो एरोरूट हो?
उत्तर: कार्बोहाइड्रेटको उच्च स्तरको कारण एरोरूट केटो होइन। एरोरूट वा एरोरूट उष्णकटिबंधीय बिरुवा मारान्टा अरुन्डिनेसियाबाट निकालिन्छ। यो बिरुवा मूल रूपमा पाइन्छ ...
केटो ट्यापियोका हो?
उत्तर: Tapioca केही केटो होइन। किनभने यसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा धेरै हुन्छ। यति उच्च, सानो भागले पनि तपाईंलाई केटोसिसबाट बाहिर निकाल्न सक्छ। उक्त…
केटो ला युका हो?
उत्तर: कासाभा केटो अनुकूल छैन। दुर्भाग्यवश, यसमा धेरै कार्बोहाइड्रेटहरू छन्। जमिनमुनि उब्जाउने धेरै तरकारीहरू जस्तै। केटोमा कासाभाबाट बच्नुपर्छ...
केटो कर्नमिल वा कर्नस्टार्च हो?
उत्तर: मकैको पिठो, कोर्नस्टार्च भनेर पनि चिनिन्छ, केटो होइन न त केटो आहारमा गहुँको पिठोको विकल्पको रूपमा मान्य छ ...
नरिवल केटो हो?
उत्तर: प्रति मध्यम नरिवलमा करिब २.८ ग्राम कार्बोहाइड्रेट भएको, नरिवल एउटा फल हो जसलाई तपाईले केटोमा धेरै नखाइकन मजा लिन सक्नुहुन्छ...
नरिवल चिनी केटो हो?
उत्तर: कोकोनट चिनी वा नरिवल पाम चिनीलाई धेरैले स्वस्थ चिनीको रूपमा मूल्याङ्कन गर्छन्। तर यो केटो केहि होइन किनकि यसले समावेश गर्दछ ...
के ट्यागाटोज स्वीटनर केटो हो?
उत्तर: हो। Tagatose ० को ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएको एक स्वीटनर हो जसले तपाईंको रगतमा चिनीको स्तर बढाउँदैन जसले यसलाई केटोसँग मिल्दो बनाउँछ। ट्यागाटोज...
बेसार केटो हो?
उत्तर: बेसारले केटो संसारमा धेरै लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ, र राम्रो कारणको लागि! केही कार्बोहाइड्रेट भए तापनि, तिनीहरूसँग आउँछन् ...
बदामको तेल केटो हो?
उत्तर: होइन। बदामको तेल भनेको केटो होइन। यो एक प्रशोधित बोसो हो जुन तपाईंको स्वास्थ्यको लागि धेरै हानिकारक हुन सक्छ। तर सौभाग्य देखि, त्यहाँ अन्य विकल्पहरू छन् ...
acai केटो हो?
उत्तर: Acai एक प्रकारको बेरी हो जुन मुख्यतया ब्राजिलमा हुर्किन्छ। कार्बोहाइड्रेट भए पनि, तिनीहरू प्रायः सबै फाइबर छन् त्यसैले ...
केटो द गुड डीको कुकी मिक्स हो?
उत्तर: गुड डीको कुकी मिक्समा केही कार्बोहाइड्रेटहरू छन्, तर तपाइँ यसलाई तपाइँको केटोजेनिक आहारमा वा यसको अंशको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
केटो चीजहरू क्रिस्पी चीज स्न्याक्स हो?
उत्तर: चिज क्रिस्पी चिज स्न्याक्स पूर्णतया केटो र कार्ब-रहित छन्। त्यसैले तपाइँ तपाइँको केटोजेनिक आहारमा कुनै पनि समस्या बिना तिनीहरूलाई आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। उक्त…
के एडोनिस सुन्तला र टर्मरिक फ्लेवर क्रन्ची ब्राजिल नट बार्स केटो हो?
उत्तर: एडोनिस ओरेन्ज र टर्मरिक फ्लेवर्ड क्रन्ची ब्राजिल नट बारहरू केटो डाइटरहरूको लागि उत्कृष्ट कम कार्ब विकल्प हुन् ...
के एडोनिस कोकोनट फ्लेवर क्रन्ची पेकन बार्स केटो हो?
उत्तर: एडोनिस कोकोनट क्रन्ची पेकन बारहरूमा केवल2ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुन्छ। त्यसैले कम मात्रामा तपाईले आफ्नो आहारमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ ...
के एडोनिस वेनिलिया फ्लेवर्ड कोकोनट क्रन्ची बार्स केटो हो?
उत्तर: adonis vanillia-flavored crnchy coconut bars एक कम-नेट-कार्बोहाइड्रेट खाजा हो जुन तपाईंको केटो आहारमा थोरै मात्रामा खान सकिन्छ।
के Aneto 100% प्राकृतिक बीफ ब्रोथ केटो हो?
उत्तर: Aneto 100% प्राकृतिक मासुको ब्रोथ पूर्ण रूपमा केटोजेनिक पूर्व-पकाएको ब्रोथ हो। हड्डी ब्रोथ एक डिश हो जुन केटो समुदायले वास्तवमै मन पराउँछ। तिनीहरूले योगदान ...
"यो केटो हो" के हो र किन?
मा पढाइ सकेपछि सन् २०१४ मा म्याड्रिडको कम्प्लुटेन्स विश्वविद्यालयमा मानव पोषण र आहारशास्त्र, म विभिन्न प्रकारका गैर-मानक आहारको विषयमा रुचि राख्थे। तिनीहरूलाई कुनै पनि तरिकामा नाम दिन। तर मेरो रुचि मा डायटा केटो यो 2016 को वरिपरि सुरु भयो। जब तपाईं कुनै पनि कुराको साथ सुरु गर्नुहुन्छ, मसँग प्रश्नहरूको समुद्र थियो। त्यसैले उत्तर खोज्न जानुपर्यो । यी सूचनाको निरन्तर पठन (वैज्ञानिक अध्ययन, विशेष पुस्तकहरू, आदि) र अभ्यासबाटै दुबै अलि-अलि गरी आए।
केहि समय पछि यसलाई व्यवहारमा राख्दै केहि नतिजाहरू जुन मलाई अचम्मको लाग्थ्यो, मैले महसुस गरें कि केहि खानेकुराहरू (विशेष गरी मिठाईहरू) को प्रतिस्थापनले मलाई केही additives को एकदमै उच्च सेवनको साथसाथै नयाँ उत्पादनहरूको पूर्ण बलियो सेटको नेतृत्व गर्यो। खुसी ल्याउन थालेका ती मानिसहरूका लागि देखा पर्न थाले केटो आहार। बजार द्रुत गतिमा चल्छ। तर मैले यी प्रतिस्थापनहरू वा विशिष्ट खानाहरू अध्ययन गर्दा, मैले महसुस गरें कि सबै दाबी गरेजस्तो केटो थिएनन्, वा त्यहाँ वैज्ञानिक अध्ययनहरू थिए जसले देखाएको थियो कि तिनीहरूमध्ये केहीलाई संयमतामा उपभोग गर्नुपर्छ।
त्यसैले मैले मेरो व्यक्तिगत प्रयोगको लागि तिनीहरूलाई सङ्कलन गर्ने निर्णय गरें। मेरो डाटाबेस बढ्दै जाँदा, मैले महसुस गरें कि यो धेरै मानिसहरूको लागि साँच्चै मान्य र उपयोगी जानकारी थियो। र यसरी जन्मिन्छ esketoesto.com। एकमात्र उद्देश्य संग कि तपाईं सक्षम हुन राम्रो जानकारी छ एक स्वस्थ र प्रभावकारी तरिकामा केटो आहार पछ्याउनुहोस्.
केटोजेनिक आहार भनेको के हो?
यो आहार 1920 मा बाल्यकालको मिर्गी उपचार गर्ने तरिकाको रूपमा उत्पन्न भएको थियो, र यसको आश्चर्यजनक सफलता दरको कारण: केटो आहार खाने मानिसहरू अनुभव %०% र %०% बीचमा कम दौराहरू, यो अझै पनि यस क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ।
तर, सामान्य रूपमा स्वस्थ जनसंख्याको लागि यसको प्रयोगको बारेमा के हुन्छ जो केवल केहि तौल घटाउन र स्वस्थ जीवन बिताउन खोजिरहेका छन्? हामी यो अल्ट्रा कम कार्बोहाइड्रेट र उच्च फ्याट आहार बिस्तारै विश्लेषण गर्न जाँदैछौं।
केटो आहारमा बोसो धेरै हुन्छ (तपाईंको कुल क्यालोरीको लगभग 80%), कार्बोहाइड्रेट धेरै कम हुन्छ (तपाईंको क्यालोरीको 5% भन्दा कम), र प्रोटीनमा मध्यम (सामान्यतया तपाईंको क्यालोरीको 15-20%)। यो सामान्यतया सिफारिस गरिएको म्याक्रोन्यूट्रिएन्ट वितरणबाट धेरै कठोर विचलन हो: 20% देखि 35% प्रोटीन, 45% देखि 65% कार्बोहाइड्रेट, र 10% देखि 35% फ्याट।
केटो आहारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटक एक सामान्य, प्राकृतिक प्रक्रिया हो जसलाई केटोसिस भनिन्छ। सामान्यतया, शरीरले ग्लुकोजमा धेरै राम्रो काम गर्दछ। शरीरले कार्बोहाइड्रेटलाई तोड्दा ग्लुकोज उत्पादन हुन्छ। यो एक सरल प्रक्रिया हो, र यसैले यो ऊर्जा उत्पादन को शरीर को मनपर्ने तरीका हो।
जब तपाइँ कार्बोहाइड्रेटमा कटौती गर्नुहुन्छ वा लामो समयसम्म खाएको छैन, तपाइँको शरीरले खाली ठाउँ भर्न ऊर्जाको अन्य स्रोतहरू खोज्छ। बोसो सामान्यतया त्यो स्रोत हो। जब रगतमा चिनी कम कार्बोहाइड्रेट सेवनबाट घट्छ, कोशिकाहरूले बोसो छोड्छन् र कलेजोमा बाढी आउँछन्। कलेजोले बोसोलाई केटोन बडीहरूमा रूपान्तरण गर्छ, जुन ऊर्जाको लागि दोस्रो विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
केटो आहारका सम्भावित फाइदाहरू के हुन्?
केटो आहार सजिलो नहुन सक्छ, तर वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाउँछ कि यसले एपिलेप्सीको उपचारमा यसको प्रयोगभन्दा बाहिरका फाइदाहरू छन्, किनकि केटो आहार निम्न उपचारहरूमा सुधारहरूसँग जोडिएको देखिन्छ:
अल्जाइमर: विज्ञानले केटोजेनिक आहार पछ्याउने अल्जाइमरका बिरामीहरूको संज्ञानात्मक कार्यमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताउँछ। मस्तिष्कलाई नयाँ ईन्धन प्रदान गरेर माइटोकन्ड्रियल प्रकार्य सुधार गर्न यो केहि गर्न मानिन्छ।
पार्किन्सन रोग: पार्किन्सन रोगको मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक अल्फा-सिन्युक्लिन भनिने प्रोटीनको असामान्य संचय हो। माइकल जे. फक्स फाउन्डेशन द्वारा वित्त पोषित अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि केटोजेनिक आहारले यी प्रोटीनहरूको ब्रेकडाउनलाई उत्तेजित गर्छ, मस्तिष्कमा अल्फा-सिन्युक्लिनको मात्रा घटाउँछ।
मल्टिपल स्क्लेरोसिस: 2016 बाट सानो अध्ययनमा, मल्टिपल स्क्लेरोसिस (एमएस) बिरामीहरू केटो आहारमा थिए। छ महिना पछि, तिनीहरूले जीवनको गुणस्तर सुधार, साथै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारहरू रिपोर्ट गरे। तर निस्सन्देह, डाक्टर र अनुसन्धानकर्ताहरूले केटो र मल्टिपल स्क्लेरोसिस बीचको सम्बन्ध पत्ता लगाउन सक्नु अघि, ठूला नमूनाहरू र थप व्यापक अनुसन्धान आवश्यक छ। तर, प्रारम्भिक नतिजा भने रोमाञ्चक छ ।
टाइप २ मधुमेह: यस प्रकारको रोगको लागि, निस्सन्देह, कार्बोहाइड्रेटलाई उनीहरूको न्यूनतम अभिव्यक्तिमा घटाउनु सामान्य हो। जसले यसलाई केटो डाइटमा टाँसिने दीर्घकालीन प्रभावहरूको धेरै रोचक प्रदर्शन बनाएको छ। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले धेरै साना नमूनाहरूमा गरिसकेको छ, प्रमाणहरूले सुझाव दिन्छ कि अल्ट्रा-लो-कार्ब आहार (जस्तै केटो आहार) ले A1C कम गर्न र 75% सम्म इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। वास्तबमा, एक 2017 संशोधन केटो आहार राम्रो ग्लुकोज नियन्त्रण र औषधि प्रयोगमा कमी संग सम्बन्धित थियो। त्यसले भने, लेखकहरूले चेतावनी दिए कि यो अस्पष्ट थियो कि परिणामहरू वजन घटाने, वा उच्च केटोन स्तरको कारण हो।
क्यान्सर: प्रारम्भिक प्रयोगात्मक अनुसन्धानले केटो आहारले ट्युमरको वृद्धिको लागि कुल क्यालोरी सेवन (र सर्कुलेटेड ग्लुकोज) कम गर्ने हुनाले ट्युमर प्रतिरोधी प्रभाव हुन सक्छ भनी सुझाव दिन्छ। मा 2014 संशोधन पशु अनुसन्धानबाट, केटोजेनिक आहारले कम गर्न राम्रोसँग काम गरेको पाइयो ट्यूमर वृद्धि, कोलोन क्यान्सर, ग्यास्ट्रिक क्यान्सर y मस्तिष्क क्यान्सर। ठूला नमूनाहरूसँग थप मानव अनुसन्धान आवश्यक छ, तर यो निश्चित रूपमा एक धेरै राम्रो सुरूवात बिन्दु हो।
केटो आहार को प्रकार
पहिले छलफल गरिएझैं, केटो आहारमा फ्याट, प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटको मात्रामा भिन्नताहरू छन्। यसले विभिन्न प्रकारका केटो आहारहरू वा यसलाई समाधान गर्ने विभिन्न तरिकाहरूमा परिणाम दिन्छ। तिनीहरू मध्ये हामी सामान्यतया फेला पार्छौं:
मानक केटो आहार (DCE): यो केटो आहारको सबैभन्दा विशिष्ट मोडेल हो र धेरै उच्च फ्याट, मध्यम प्रोटीन खपतमा आधारित छ। यसले सामान्यतया समावेश गर्दछ: 75% फ्याट, 20% प्रोटीन र 5% कार्बोहाइड्रेट।
उच्च प्रोटीन केटो आहार: मानक आहार जस्तै, तर अधिक प्रोटीन समावेश गर्दछ। ६०% बोसो, ३५% प्रोटिन र ५% कार्बोहाइड्रेट।
चक्रीय केटो आहार (DCC): यो एक योजना हो जसमा कार्बोहाइड्रेटको उच्च सेवन भएको अवधि समावेश हुन्छ, उदाहरणका लागि, हप्तालाई लगातार ५ केटो दिन र बाँकी २ दिनलाई कार्बोहाइड्रेटमा विभाजन गर्ने।
अनुकूलित केटोजेनिक आहार (DCA): तपाईंलाई प्रशिक्षणमा जाने दिनहरूमा कार्बोहाइड्रेट थप्न अनुमति दिन्छ।
यद्यपि वास्तविकता यो हो कि केवल मानक केटो र उच्च प्रोटीन आहारहरूमा व्यापक अध्ययनहरू छन्। तसर्थ, चक्रीय र अनुकूलित संस्करणहरूलाई उन्नत विधिहरू मानिन्छ र एथलीटहरू द्वारा अधिक प्रयोग गरिन्छ।
यस लेखमा र सामान्यतया वेबमा, अनुकूलनलाई सहज बनाउन, म DCE (मानक केटो आहार) सँग काम गर्दैछु।
के म साँच्चै केटो आहारमा तुलनात्मक रूपमा छिटो वजन घटाउन सक्छु?
म मोटो केटा थिए। निश्चित रूपमा किशोरावस्थामा तपाईले वजन घटाउनुहुन्छ जब तपाई स्ट्रेच गर्नुहुन्छ, उनीहरूले मलाई भने। नतिजा? म एक मोटी किशोर थिए। यसले मेरो जीवनका धेरै पक्षहरूलाई चिन्ह लगाइदियो। १७ वर्षको हुँदा मैले आफ्नै मनमा तौल घटाउन थालें। यसले मलाई मानव पोषण र आहारशास्त्र अध्ययन गर्न नेतृत्व गर्यो। मेरो डिग्रीको दोस्रो वर्षमा, म पहिले नै सामान्य र स्वस्थ शरीर भएको व्यक्ति थिएँ। र यसले व्यक्तिगत र व्यावसायिक स्तरमा मेरो जीवनमा वास्तवमै धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। कसले मोटो आहार विशेषज्ञलाई विश्वास गर्ने?
त्यसोभए जवाफ एक गजबको हो हो। यदि तपाइँ केटो आहारमा वजन घटाउन सक्नुहुन्छ। म कुनै अति-चमत्कारिक चीज वा कुनै बकवासको बारेमा कुरा गरिरहेको छैन। अनुसन्धानले देखाउँछ कि तपाईले तौल घटाउनुहुन्छ र अधिक, तपाईले उच्च स्तरको साथ मानक आहारको तुलनामा छिटो गुमाउनुहुन्छ वा "सामान्यकार्बोहाइड्रेट पहिले नै भाग छ, र केहि रोगहरु को जोखिम कारकहरु लाई कम गर्दछ।
अझ के हो भने, तपाईंले दिनभर क्यालोरीहरू गणना नगरी वा तपाईंले कति खानु हुन्छ भन्ने पूर्ण नियन्त्रण नराखी वजन घटाउनुहुन्छ।
अध्ययनहरूले केटो आहार पछ्याउने मानिसहरूले क्यालोरी र बोसो घटाउनेहरूको तुलनामा लगभग 2.2 देखि3गुणा बढी तौल गुमाउने देखाउँछन्। र यद्यपि यो उल्टो लाग्न सक्छ, ट्राइग्लिसराइड्स र एचडीएल कोलेस्ट्रोल स्तरले पनि सुधार देखाउँदछ।
थप रूपमा, केटो आहार, प्रोटिन खपतमा भएको वृद्धि र चिनीमा यसको कमीले गर्दा, सुधारिएको इन्सुलिन संवेदनशीलता जस्ता अन्य फाइदाहरू (तौल घटाउने भन्दा बाहिर) प्रदान गर्दछ।
मैले कस्ता खानेकुराबाट बच्नुपर्छ?
मूलतः धेरै उच्च कार्बोहाइड्रेट स्तर संग। उदाहरणका लागि:
चिनीको मात्रा बढी भएका खानेकुरा र सफ्ट ड्रिंक्स: सफ्ट ड्रिंक्स, जुस, स्मूदी, मिठाई, आइसक्रिम आदि।
अनाज, अधिकांश पीठो र व्युत्पन्नहरू: पास्ता, चामल, अनाज, आदि।
फलफूल: धेरै जसो जामुन को अपवाद संग सबै फलहरु, जस्तै स्ट्रबबेरी, कालोबेरी, अमरूद, प्लमहरू, रास्बेरी, आदि
सिमी वा फलफूल: सिमी, दाल, चना, मटर, आदि।
जरा र ट्युबर तरकारीहरू: मीठो आलु, गाजर, आलु, आदि।
आहार वा कम फ्याट उत्पादनहरू: तिनीहरूसँग धेरै सावधान रहनुहोस्। तिनीहरू सामान्यतया अल्ट्रा-प्रशोधित र कार्बोहाइड्रेटमा धेरै धनी हुन्छन्।
मसलाहरू वा ससहरू: तपाईंले तिनीहरूलाई म्याग्निफाइङ्ग ग्लासको साथ हेर्नु पर्छ। किनभने तिनीहरूमध्ये धेरैमा चिनी र संतृप्त फ्याटको धेरै मात्रा हुन्छ।
स्याचुरेटेड फ्याट: केटो आहार बोसोको सेवनमा आधारित भएता पनि, परिष्कृत तेल वा मेयोनेजमा धेरै सामान्य संतृप्त बोसोलाई सीमित गर्न आवश्यक छ।
अल्कोहल: यसको चिनी सामग्री साँच्चै धेरै उच्च छ। त्यसैले केटो आहारमा यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सल्लाह दिइन्छ।
चिनी नभएको खानेकुरा : यहाँ पनि धेरै सावधानी अपनाउनुपर्छ । किनकि सबै मिठाईहरू केटो आहारको लागि उपयुक्त हुँदैनन्। यसरी यहाँ मैले सबैभन्दा सामान्य मिठाईहरूको विश्लेषण गरेको छु। तपाईलाई थाहा छ कि तपाई कुन आहारबाट बाहिर नजाइकन खान सक्नुहुन्छ।
केटो डाइटमा तपाई कुन खाना खान सक्नुहुन्छ?
एक केटो आहार मुख्यतया बनेको छ:
मासु: रातो, स्टेक, सेरानो ह्याम, बेकन, टर्की, कुखुरा, ह्यामबर्गर मासु, आदि।
फ्याटी माछा: साल्मन, टुना, ट्राउट, म्याकरेल, आदि।
चीजहरू: मुख्य रूपमा प्रशोधन गरिएको छैन जस्तै चेडर, मोजारेला, गोट चिज, नीलो।
नट र बीउ-प्रकारका नटहरू: बादाम, सबै प्रकारका ओखर, कद्दूको बीउ, चिया बीज, आदि।
अप्रशोधित तेल: एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिभ, नरिवल र एभोकाडो तेल।
एभोकाडो: या त पूरै वा गुआकामोल आफैले बनाएको। यदि तपाइँ यसलाई खरिद गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले जाँच गर्नुपर्नेछ कि यसमा केहि थपिएको छैन।
हरियो तरकारी जसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम हुन्छ र साथै टमाटर, प्याज र खुर्सानी आदि।
विशिष्ट मसलाहरू: नुन, काली मिर्च, जडीबुटी, आदि।
केटो डाइट नछोडी बाहिर खानुहोस्
अन्य प्रकारका आहारहरू जस्तो नभई, केटो आहारमा, घर बाहिरका खानाहरू अत्यधिक जटिल हुँदैनन्। व्यावहारिक रूपमा सबै रेस्टुरेन्टहरूमा तपाईंले मासु र माछा जस्ता पूर्ण रूपमा केटो-अनुकूल विकल्पहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं राम्रो ribeye वा सामन जस्तै उच्च बोसो माछा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मासु आलुको साथमा छ भने, तपाइँ यसलाई बिना समस्या बिना साना तरकारीहरू प्रतिस्थापन गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ।
अण्डाको साथ खाना पनि एक राम्रो समाधान हो जस्तै ओमलेट वा बेकन संग अण्डा।
अर्को धेरै सरल डिश ह्याम्बर्गर हुनेछ। तपाईंले भर्खरै रोटी हटाउनु पर्छ र तपाईंले अतिरिक्त एभोकाडो, बेकन चीज र अण्डाहरू थपेर यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
मेक्सिकन जस्ता सामान्य रेस्टुरेन्टहरूमा तपाईलाई कुनै समस्या हुनेछैन। तपाईं कुनै पनि मासु अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र चीज, guacamole, र साल्सा वा खट्टा क्रीम को एक राम्रो मात्रा थप्न सक्नुहुन्छ।
केही सहकर्मीहरूसँग बारमा पेय पिउन कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा, तपाईंलाई पनि समस्या हुनेछैन। ए कोकाकोला ०वा डाइट कोक साथै अन्य कुनै पनि सोडा वा सुगर फ्री नेस्टिया पूर्णतया केटो हो। तपाईं समस्या बिना कफी पनि पिउन सक्नुहुन्छ।
यी सबैको साथ, तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ कि आउटपुटहरू अन्य आहारहरूको रूपमा नाटकीय छैनन्। तपाईंले खाना खाँदा दोषी महसुस गर्नुपर्दैन किनकि यो पूर्ण सुरक्षाको साथ हो, तपाईंले आफ्नो केटो आहारको साथ साँच्चै रमाइलो विकल्पहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
केटो आहारको साइड इफेक्ट र तिनीहरूलाई कम गर्न के गर्ने
धेरैजसो आहारहरू जस्तै, तपाईंले केटो आहार सुरु गर्दा केही साइड इफेक्टहरू महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो बिल्कुल सामान्य छ। तपाइँको शरीर एक निश्चित तरिकामा काम गर्न को लागी बानी छ र तपाइँ यसलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईं डराउनु हुँदैन। केटो आहार राम्रो स्वास्थ्य भएका मानिसहरूका लागि पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ।
कसैले यी साइड इफेक्टहरू बोलाउँछन्: केटो फ्लू.
यो तथाकथित केटो फ्लूले सामान्यतया ऊर्जा स्तरमा गिरावट, थोरै स्पष्टताको साथ सोच्ने भावना, बढ्दो भोक, पाचन गडबड र खेलकुदमा प्रदर्शनमा कमी निम्त्याउँछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, केटो फ्लू तपाईले कुनै पनि आहार सुरु गर्दा अनुभव गर्नुहुने अनुभूति भन्दा धेरै फरक छैन। यी साइड इफेक्टहरू केही दिन टिक्छन् र अन्ततः गायब हुन्छन्।
यी प्रभावहरूलाई कम गर्न, एक रोचक विचार भनेको पहिलो हप्ताको लागि मानक आहार कायम राख्नु हो तर कार्बोहाइड्रेटको मात्रालाई कम गर्न। यस तरिकाले, तपाईंको शरीरले कार्बोहाइड्रेटको सेवनलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नु अघि बिस्तारै बोसो जलाउन अनुकूलन गर्न सक्छ।
केटो आहारले तपाईंको शरीरमा पानी र खनिजहरूमा पनि ठूलो परिवर्तन गर्छ। त्यसैले तपाईं आफ्नो खानामा केही अतिरिक्त नुन थप्न सक्नुहुन्छ वा यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने खनिज पूरकहरू लिन सक्नुहुन्छ। प्रति दिन 3.000 देखि 4.000 मिलीग्राम सोडियम, 1.000 मिलीग्राम पोटासियम र 300 मिलीग्राम म्याग्नेसियमको सेवनले अनुकूलन अवधिमा साइड इफेक्टहरू धेरै कम गर्छ।
यो महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी सुरुमा, तपाईंले पूर्ण रूपमा तृप्त नभएसम्म खानु हुन्छ। कुनै क्यालोरी प्रतिबन्ध छैन। केटो आहारले जानाजानी क्यालोरी नियन्त्रण वा सीमा बिना तौल घटाउँछ। तर यदि तपाइँ तिनीहरूलाई छिटो प्रभाव पार्न नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ भने, कम्तिमा सुरुमा भोकै नबर्न प्रयास गर्नुहोस्। यसले तपाईंलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कायम राख्न मद्दत गर्नेछ।
केटोजेनिक आहार मेरो लागि राम्रो विचार हो?
सबै आहारहरू जस्तै, त्यहाँ मानिसहरू छन् जसको लागि केटो आहार उपयुक्त हुनेछैन। केटोजेनिक आहार धेरै तौल भएका, मधुमेह भएका वा आफ्नो मेटाबोलिक स्वास्थ्य सुधार गर्न चाहनेहरूका लागि धेरै राम्रो हुन्छ।। तर यो एथलीटहरू वा धेरै मांसपेशी वा वजन हासिल गर्न चाहने मानिसहरूका लागि धेरै उपयुक्त छैन।
यसबाहेक, कुनै पनि आहारको रूपमा, यदि तपाइँ यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ र एकरूप हुनुहुन्छ भने यसले काम गर्नेछ। र परिणाम मध्यम-दीर्घकालीन हुनेछ। आहारमा जानु भनेको लामो दूरीको दौड हो। तपाईले यसलाई सहज रूपमा लिनु पर्छ। सोच्नुहोस् कि निश्चित रूपमा, तपाईं लामो समयको लागि आफ्नो उचित वजनबाट बाहिर हुनुहुन्छ। 15 दिनमा ती सबै गुमाउन चाहनुको कुनै अर्थ छैन (र यो स्वस्थ पनि छैन)।
तैपनि, र एक पटक माथिका सबै कुराहरू विचार गरिसकेपछि, केही चीजहरू पोषणमा प्रभावकारिता जत्तिकै प्रमाणित हुन्छन् जब यो तौल घटाउने कुरा आउँछ र केटो आहारसँग आउने स्वास्थ्य लाभहरू।
म धेरै वर्षको लागि यो आहार सिफारिस गर्दैछु। र सबै चीजहरूसँग जस्तै, त्यहाँ स्टार्टअपमा र विकासको क्रममा केही व्यापक शंकाहरू छन् जुन म हटाउन प्रयास गर्न जाँदैछु।
के म मांसपेशी गुमाउन जाँदैछु?
सबै आहार संग, मांसपेशी मास मा कमी सम्भव छ। तर प्रोटीन सेवन को मात्रा सामान्य आहार मा भन्दा ठूलो छ, र त्यहाँ केटोन को उच्च स्तर छ, यो सम्भावित हानि धेरै कम छ र केहि तौल गर्न पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछैन।
के म केटो आहारमा मेरो मांसपेशिहरु काम गर्न सक्छु?
हो, तर यदि तपाईंको उद्देश्य मात्रा बढाउने हो भने, केटो आहार यसको लागि मध्यम कार्बोहाइड्रेट आहार भन्दा कम प्रभावकारी हुन्छ।
के म फेरि कार्बोहाइड्रेट खान सक्षम हुनेछु?
अवश्य पनि। तर तपाईले कार्बोहाइड्रेटलाई नाटकीय रूपमा काट्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो वास्तवमै आहारको आधार हो र तपाईंले कम्तिमा पहिलो2वा3महिनाको लागि तिनीहरूको न्यूनतम सेवन गर्नुपर्छ। त्यो अवधि पछि, तपाइँ विशेष अवसरहरूमा कार्बोहाइड्रेट खान सक्नुहुन्छ, तर तुरुन्तै पछि तपाईले न्यूनतम स्तरमा फर्कनु पर्छ।
म कति प्रोटिन खान सक्छु?
प्रोटिन मध्यम मात्रामा सेवन गर्नुपर्छ। एक उच्च सेवनले इन्सुलिन स्पाइक निम्त्याउन सक्छ र केटोन्स कम गर्न सक्छ। अधिकतम सिफारिस गरिएको सीमा कुल क्यालोरीको 35% हो।
म निरन्तर थकित वा थकान महसुस गर्छु
निस्सन्देह, तपाइँ गलत तरिकामा आहार गर्दै हुनुहुन्छ वा हुनसक्छ तपाइँको शरीरले बोसो र केटोनहरू सही तरिकामा प्रयोग गरिरहेको छैन। आफ्नो कार्बोहाइड्रेट सेवन कम गर्नुहोस् र मैले पहिले दिएको सल्लाह जारी राख्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो शरीरलाई मद्दत गर्न TMC पूरक वा केटोन्स पनि लिन सक्नुहुन्छ।
के यो सत्य हो कि ketosis धेरै खतरनाक छ?
हुदै हैन। त्यहाँ मानिसहरू छन् जसले केटोसिसको अवधारणालाई केटोएसिडोसिसको अवधारणासँग भ्रमित गर्छन्। केटोसिस शरीरमा एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, जबकि केटोएसिडोसिस पूर्ण रूपमा अनियन्त्रित मधुमेहको अवस्थामा देखा पर्दछ।
केटोएसिडोसिस खतरनाक छ, तर केटोजेनिक आहारको समयमा हुने केटोसिस सामान्य र पूर्ण रूपमा स्वस्थ छ।
यदि मलाई भारी पाचन र / वा कब्जियत छ भने मैले के गर्ने?
यो साइड इफेक्ट3वा4हप्ता पछि देखा पर्न सक्छ। यदि यो जारी रह्यो भने, उच्च फाइबरयुक्त तरकारीहरू खाने प्रयास गर्नुहोस्। कब्जियतबाट छुटकारा पाउन म्याग्नेसियम सप्लिमेन्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
मेरो पिसाबमा फलफूलको गन्ध छ
चिन्ता नगर। यो केवल ketosis को समयमा उत्पन्न उत्पादनहरु को उन्मूलन को कारण हो।
यदि मेरो सास गन्हाउछ भने म के गर्न सक्छु?
प्रशस्त प्राकृतिक फलफूल स्वादयुक्त पानी पिउने प्रयास गर्नुहोस् वा चिनी-रहित गम चपाउनुहोस्।
के मैले समय समयमा कार्बोहाइड्रेट रिफिल गर्न आवश्यक छ?
यो आवश्यक छैन, तर यो सामान्य भन्दा धेरै क्यालोरी संग केहि दिन सम्मिलित गर्न लाभदायक हुन सक्छ।
नवीनतम केटो मिठाई व्यञ्जनहरु
केटो हेलोवीन फ्रोस्टेड कुकीज रेसिपी
केटो डाइट म्याक्रो मील प्लानर कसरी बनाउने
नवीनतम केटो व्यञ्जनहरु
केटोजेनिक, कम कार्ब, सुगर फ्री र ग्लुटेन फ्री "शुगर" कुकी रेसिपी
केटो कुकी क्रस्ट र चकलेट क्रीम भरिएको केक नुस्खा
केटो क्रीमी लेमन बार्स रेसिपी
केटो र चिनी फ्री केक ब्याटर आइसक्रीम नुस्खा
केटो केक आटा कुकी नुस्खा
सजिलो केटो स्क्वाश बार्स रेसिपी
© प्रतिलिपि अधिकार 2022 यो केटो हो? सबै अधिकार सुरक्षित।
यस पोर्टलको मालिक, esketoesto.com, Amazon EU सम्बद्ध कार्यक्रममा भाग लिन्छ, र सम्बद्ध खरिदहरू मार्फत प्रवेश गर्दछ। त्यो हो, यदि तपाइँ हाम्रो लिङ्कहरू मार्फत Amazon मा कुनै पनि वस्तु खरिद गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, यसले तपाइँलाई केहि पनि खर्च गर्नु पर्दैन तर Amazon ले हामीलाई एक कमिशन दिनेछ जसले हामीलाई वेब वित्त पोषण गर्न मद्दत गर्नेछ। यस वेबसाइटमा समावेश गरिएका सबै खरिद लिङ्कहरू, जसले / खरीद / खण्ड प्रयोग गर्दछ, Amazon.com वेबसाइटमा निर्देशित गरिन्छ। Amazon लोगो र ब्रान्ड Amazon र यसका सहयोगीहरूको सम्पत्ति हो।